အသုံးပြုသူများအတွက် Instagram ပုံပြင်များကိုဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲ Androidsis
Instagram ပုံပြင်များ ဒီ app ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကိုတိုးတက်မှုများလုပ်ကြပါတယ် ဒီတူညီတဲ့နွေရာသီလိုပဲ။ သုံးစွဲသူများစွာမသိသောလုပ်ဆောင်ချက်မှာလူမှုကွန်ယက်ပေါ်ရှိအခြားအသုံးပြုသူများထံမှသူတို့၏ပုံပြင်များကိုဖုံးကွယ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်မမြင်လိုသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ရှိပါက၎င်းတို့ကိုသူတို့မမြင်နိုင်ပါ။ သူသည်သင်၏နောက်လိုက်ဖြစ်သော်လည်းသူသည်သို့မဟုတ်သင်အလွယ်တကူဖျက်ပစ်နိုင်သည်.
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်အဆင့်များဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင်များကိုလူအချို့ထံမှဝှက်ရန်။ ဒါကြောင့် Instagram ကိုကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်ပြီးတကယ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့သူတွေကဒီပုံပြင်တွေမှာတင်လိုက်တဲ့အရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကွန်ရက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်သို့သွားရမည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်ဖန်သားပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်တွေ့ရသောအလျားလိုက်အစင်းသုံးခုကိုကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ပါ။ ရွေးချယ်မှုများစွာထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည် အရာ၏ကျနော်တို့ configuration ကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်, မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ပြသ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် app ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Instagram setting တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် «ပုံပြင်ထိန်းချုပ်မှု»လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းကိုရှာပါ။ သောမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ရိုက်ထည့်ပါ။ ဤကဏ္inတွင်ပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာသည့်အရာမှာ“ Hide history from” ဟုခေါ်သောအပိုင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဤကိစ္စတွင်စိတ်ဝင်စားစေသည်။
ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Instagram ရှိကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လိုက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်စာရင်းတစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ငါတို့လုပ်မယ့်အရာဖြစ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင်များကိုမကြည့်လိုသောလူများကိုရွေးချယ်ပါ ဤစာရင်းတွင်ရှိသူများအကြား။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီကိုနှိပ်ပါ။ ငါတို့ပြီးပြီဆိုရင်ငါတို့ကထွက်ဖို့ပဲလိုတယ်။
ဤနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ် Instagram တွင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို upload လုပ်သည်။ ဒီလူတွေကငါတို့တင်ပို့တဲ့အရာကိုကြည့်လို့မရဘူး။ သူတို့ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မရှိအောင်တားဆီးဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း။ ပြီးတော့အချိန်မရွေးသင့်ဖုန်းထဲမှာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်၊ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုဤနေရာတွင်ရှာဖွေပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင့်ရဲ့ Instagram ပုံပြင်များကိုလူအချို့ထံမှဝှက်ရန်
သင်အသုံးပြုသည့်အခါ Android အက်ပ်များသည်အသစ်ပြောင်းမည်